Sidee looga Shaandheeyaa Gudbinta Spam-ka Google Analytics
Liiska Diiwaangelinta SPAM: Sida looga Saarayo Spam Gudbinta Warbixinta Google Analytics
Talaado, Disembar 1, 2020 Thursday, April 1, 2021 Douglas Karr
Weligaa ma hubisay warbixinnadaada Google Analytics kaliya inaad ka hesho tixraacyo aad u la yaab badan oo ka soo baxaya warbixinnada? Waxaad aadeysaa boggooda mana jiraan wax lagaa sheegayo laakiin waxaa jira dalabyo kale oo halkaa ah. Qiyaas waxa Dadkaasi waligood uma gudbin taraafikada bartaada.
Hadaadan ogaan sida Google Analytics shaqeeyey, asal ahaan pixel ayaa lagu darayaa bog kasta oo xamuul ah oo qabsada tan xog ah una diro mashiinka Google Analytics. Google Analytics ayaa markaa kala daadinaya xogta waxayna si habsami leh ugu abaabulaysaa warbixinnada aad fiirineyso. Meel sixir ah maleh!
Laakiin qaar ka mid ah shirkadaha been abuurka ah ee been abuurka ah ayaa dib u cusbooneysiiyay dariiqa Google Analytics pixel oo hadda been abuur ah jidka oo ku dhufanaya tusaalahaaga Google Analytics. Waxay ka helaan lambarka 'UA' qoraalka aad ku dhex dartay bogga ka dibna, server-kooda, waxay si fudud u garaacaan GA server-ka marar badan illaa ay ka bilaabayaan inay ku soo baxaan warbixinnada gudbintaada.
Runtii waa wax xun maxaa yeelay waligood xitaa kamay bilaabin booqashada bartaada! Si kale haddii loo dhigo, ma jiraan wax macno ah oo loogu talagalay boggaaga inuu si dhab ah u xannibo. Waxaan ku wareegay oo ku wareejiyay tan aniga iyo martidayadii oo si dulqaad leh u sharraxay wixii ay qabanayeen in ka badan iyo in ka badan ilaa ay ka soo mareen dhakadeyda qaro weyn. Waxaa loo yaqaan a gudbin cirfiid or gudbin cirfiid maadaama aysan waligood taaban goobtaada waqti kasta.
Daacadnimo dhan, wali ma hubo sababta Google uusan si fudud u bilaabin dayactirka keydka macluumaadka ee ku saabsan spamerka gudbinta. Waa maxay muuqaalka weyn ee u noqon lahaa barnaamijkooda. Maadaama booqashadu aysan dhab ahaan dhicin, qashin-wadayaashani waxay ku kacayaan dhibaato warbixinnadaada. Mid ka mid ah macaamiisheena gudbiyaha spam wuxuu ka kooban yahay in ka badan 13% dhammaan booqashooyinka boggooda!
Abuur Qayb ka mid ah Google Analytics oo xannibaya Spammarka gudbiya
Gal koontadaada Google Analytics.
Fur Muuqaalka ay ku jiraan warbixinnada aad rabto inaad isticmaasho.
Dhagsii tabka Warbixinta, ka dibna fur warbixinta aad rabto.
Xagga sare ee warbixintaada, guji + Kudar Qeyb
Magaca qeybta Dhamaan Gaadiidka (No Spam)
Xaaladaada, hubi inaad sheegto ka baxsan leh ilo tartamada regex.
Waxaa jira liistada la cusbooneysiiyey ee ku-dirista spam ee Github ee adeegsadayaasha Piwik ay adeegsanayaan waana wax fiican Waxaan si toos ah u jiidayaa liiskaas oo aan si sax ah ugu qaabeynayaa qoraal OR ka dib gobal kasta (waad nuqulan kartaa oo ku dhajin kartaa aagga qoraalka hoose ee Google Analytics):
Keydso qeybta oo waxaa heli kara guri kasta oo ku jira koontadaada.
Waxaad ku arki doontaa tan oo ah qoraallada serverka iyo fiilooyinka halkaa si aad isugu daydo oo aad uga horjoogsato spamers gudbinta bartaada. Ha ku mashquulin adeegsiga iyaga… xusuusnow in kuwani ayan ahayn booqashooyin dhab ah oo bartaada ah. Qoraallada ay dadkaasi adeegsanayaan waxay si toos ah uga been abuurtay GA pixel-ka server-kooda weligoodna xitaa kuuma imaan!
Tags: Analyticsxannibaadda spam gudbiyahaAnalytics googlespam gudbiyahaliiska spamferka
Omnify: Boos celinta khadka tooska ah, Boos celinta, iyo Madal Lacageed
Meelna lagu ogayn
Jul 3, 2014 markay ahayd 8:33 AM
Waad ku mahadsantahay talooyinkan. Waxay dhibsatay inaan ku haysto statskeyga.
1, 2015 at 5: 27 PM
Waxaad sharad. Waxaan u cusbooneysiineynaa xalka saxda ah tan tan iyo markii gudbiyayaashu aysan xitaa imaanaynin bartaada.
Caawinta Spam Caawiyaha (@RefSpamHelp)
Waxaan sidoo kale xanaaq ka qabnay spam dirista. Waxaan isku daynay qaar ka mid ah “xalalka” laga helay webka - btw htaccess-manipulaton kama hor istaageyso tixraacyada cirfiidyada -, waxaan waqti ku luminay gacan ku sameynta miirayaal GA oo si dhameystiran u dhisnay xalkayaga iswada. http://www.referrer-spam.help ...
Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay
1, 2015 at 5: 28 PM
Waxayna umuuqataa dadka soo gudbiya cirfiidka inay noqdeen ciyaaryahanka ugu awooda badan. Waan cusbooneysiinay talooyinka goobta. Waad ku mahadsan tahay dhammaan caawimaadda aad bixiso!
Waad ku mahadsan tahay dhammaan kaalmadaada tan!
1, 2015 at 5: 29 PM
Waxaad sharad. Waxaan cusbooneysiinay talooyinka si ku saleysan qaababka gudbinta cirfiidka cusub ee jerkyadan ay adeegsanayaan.
Jun 11, 2015 at 3: 16 PM
Qeyb weyn oo caawimaad ah halkan, mahadsanid! Hadda si dulqaad leh loo sugo isbeddelka heerka soo kabashada 😀
1, 2015 at 5: 50 PM
Waxaan cusbooneysiiyay talada si aan u bixiyo qayb ka mid ah Google Analytics. Habkaas waxaad u arki kartaa saameynta isla markiiba.
Agoosto 5, 2015 saacaddu markay ahayd 4:21 PM
Waa arrimo spam xun oo xagga sare / hoose ah: Spammers-ka ayaa soo dhiibaya kadibna waxay siinayaan daaweyn - taasi waa malahayga.
Miyaad hubisay baloogyada IP-ga ama wax si aad u ogaato haddii ay jiraan kala duwanaansho aad ku heli karto?
Fikradaha kale waxaan isku dayayaa inaan arko haddii kuwa kale isku dayeen:
1) Waxaan dhihi lahaa dib udajiso cookie-ka si aad uguhesho waqti kulan oo dheeri booqasho ahaan laakiin bot-bot-ka ayaa sii daali doona goobta. Waxyaabahan waxay u baahan yihiin in loola dhaqmo sida weerarada DDoS sababta oo ah sida ay u daadinayaan ilaha jirka
2) Samee astaan ​​cusub oo ku qor lambarka cusub Google Tag Manager si koodhku uusan u sahlaneyn in si fudud looga gudbo Sidoo kale, sameynta koonto cusub iyo sameynta sida 4 astaamo si tirada ugu dambeysa aysan ku dhammaan -1 waa tixgelin kale. Laakiin, waxaan ku qiyaasayaa waqtigan in qashin-wadayaashu ay si otomaatig ah u soo saarayaan lambarrada UA ama ay iska indha tirayaan lambarrada UA dhammaantood & iyagoo adeegsanaya aaladda wax dhise url olole.
Aug 13, 2015 at 6: 06 AM
Hambalyo, hage weyn, waxaan dhisay qalab bilaash ah oo galaangal u leh falanqaynta isla markaana dhisaya faylka htaccess ee bartaada, bilaash http://refererspamtool.boyddigital.co.uk/ sii
Agoosto 14, 2015 saacaddu markay ahayd 10:20 PM
Colin, tani waa qalab cajiib ah! Waxaan ku dari doonaa boostada!
Don Schindler (@dhimbiil)
8, 2015 at 4: 50 PM
Waxyaabo waaweyn, Douglas.
8, 2015 at 5: 50 PM
Mahadsanid Don! Waxaan rajeynayaa in wax walba hagaagsan yihiin.
22, 2015 at 10: 27 AM
Runtii faa iido badan…. noocan ah taraafikada spam waa sababta ugu horeysa ee warbixinnada khalkhalka leh ee falanqaynta, taas oo runtii aan gacan ka geysaneynin inay muujiyaan macaamiisha sida goobta wax u socoto.
Jan 1, 2016 saacadu markay ahayd 12:55 PM
waad ku mahadsantahay degelkeyga waxaa ka buuxa spam iyo adsense ayaa iga mamnuucay
Jan 3, 2016 saacadu markay ahayd 6:10 PM
Spam-ku wuxuu noqonayaa arin aad u weyn maalmahan. Si kastaba ha noqotee, boostadani kuma saabsana bartaada ama dadka runti been ku sheegaya boggaaga. Waxay kala baxayaan Google Analytics. Waa in uusan saameyn ku yeelan Adsense-kaaga gabi ahaanba, laakiin wuxuu khalkhal gelin doonaa Google Analytics-kaaga.
Runtii waan ka dhergay spamkan. Waxaan rajeynayaa inay i caawin doonto.
Sidoo kale waan ahay Ma rumaysan karo in Google uusan xal u keenin tan.
Qeyb weyn, ayaa waxoogaa dhibaato ah la soo kulantay arrintani waagii hore oo dadka badankood waxay umuuqdaan inaysan wax fikrad ah ka haysan inay xitaa socoto!
Mahadsanid waana ku raacsanahay actually Runtii ma ogeyn waxa socday muddo dheer, sidoo kale!
Waad ku mahadsantahay maqaalkaaga Douglas. Akhris weyn. Gabi ahaanba waan necbahay spam, waxay dhibaatooyin badan u keentay websaydhadayda waqtiyadii lasoo dhaafay, mararka qaar waxay sababi jirtay in bogaggeyga wordpress ay burburaan markii aan lahaa nooc ka weyn wordpress.
Dhab ahaantii waxaan la wadaagayaa qodobkan boggeyga.
Waxaan hadda bilaabayaa blog wordpress ah oo loogu talagalay suuqleyda.
Hi Douglas .. waxaan qabaa hal su'aal. Waxaan dhowr jeer ka helayaa com.google.android.googlequicksearchbox / .com
Taasi miyay kujirtaa spam? waad ku mahadsantahay jawaabtaada
Hi Fauzy, waxaan aaminsanahay inay taasi tahay tixraac sharci ah oo ka socda Barnaamijka mobilada Google Android.
Aug 11, 2016 at 10: 46 AM
Waa maxay sababta gudbinta cirfiidka ay u dhacdo, maxay kuwan khiyaanooyinka ahi ka baxaan?
Aug 11, 2016 at 10: 49 AM
Run ahaantii waa wax laga xumaado. Faa'iidada kaliya ayaa ah in isticmaaleyaasha falanqaynta yar-yar ay raadsan doonaan tixraaca oo laga yaabo inay iibsadaan wax soo saarkooda ama adeegyadooda. Waa qaab aad u jaban oo doqonimo ah oo la isku dayayo in lagu khiyaaneeyo milkiilayaasha bogagga aan aqoonta lahayn.